झापालीहर्ले अधिकृत पनि पाएनन् ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, असोज २५, २०७७ मा प्रकाशित
हौ ज्यामिरे बोटे कान्छा ! विहानै के भन्न आयो ? उभिण्डे खोलाले हान्यो कि क्या हो घरबारी !
खहरे जस्तो बौलार आयो । हान्नु चै भ्याएन । उभिण्डेलाई हेप्छन् मान्छेहरु । कुन चै दिन वगाउँछ अनि थाहा पाउँछन् ।
अनि के भन्न आइस् त हौ कान्छा ! उता काठमाडौंमा तेरो दाजुको खवर के छ ? फुन वार्ता हुन्छ होला नि के भन्छन् ?
के भन्नु हौ काका ! यहँ बाउ–आमा पिर गर्छन् । उहाँ ठूले भने फुपूको श्राद्ध नगरी आउँदिन भन्छ । अहिले पनि मामाको घोडी चढेर हिँडेको छ ।
त्यसो नभन कान्छा ! ठेक्कापट्टा मिलाएर खाने कुरोलाई फुपूको श्राद्ध भन्दैनन् । ‘जसले मह काड्छ उसले हात चाट्छ’ । मामाको घोडी पनि होइन त्यो आफ्नै भइसक्यो । अब यस्तो कुरा गरेर फेरि पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन । पहिला ओलीको विरोध गरियो भन्दैमा अब नेता मान्न सकिदैन भन्नु हुदैन ।
हुन त हो नि काका ! अब के भन्नु र ! आफ्नो दौराको तुना बान्न सकेनन् अहिले अर्काको लङ्गौटी समातेर बागमती तर्न खोज्दै छन् । आ…काका ! मलाई त यो राजनीति कुरो गर्न आम्दा नि आम्दैन । काठमाडौंमा दैनिक कोरोना संक्रमित बढेका बढ्यै छन् । अस्पताला राख्ने ठाम नै छैन । सबैतिर आर्थिक मन्दी छाएको छाएकै छ । त्यही बेला राजनीतिको मारामार ! झुम्री काकी खै त !
ए……ज्यामिर बोटे कान्छा ! आज के खोज्दै आयौ ? बाउ आमा निको आनन्दै छन् कि नाई !
निको आनन्दै छन् काकी ! बाउ आज दशैंलाई खसी खोज्न भनेर गैरीगाउँ करम वोटेका घरतिर गाका छन् । यो महामारीको बेला चाडवाड पनि कसरी मनाउने ! बडो दोधारमा परियो ।
यस्तै हो कान्छा ! नेपाललाई २०७२ सालदेखि नै दशा लागेको छ । कहिले नाकाबन्दी कहिले भूकम्प, कहिले बाढी पहिरो, कहिले कोरोना अनि यस्तै बेलामा राजनीतकि खिचातानी ! यो भन्दा दुःखद पक्ष के हुन सक्छ ?
यो झुम्री पनि बढी कुरो गर्छे । राजनीति खिचातानी र चिसापानी भन्छे ! विचरा राजनीति गर्नेले पनि के गर्नु ! अस्ति भिरघरे भन्दै थियो । पक्ष प्रतिपक्ष सप्पै मिल्दा पनि विर्तामोड नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी आफूले भनेको मान्छे लान सकेनन् अरे ! लु हौ नाम मात्र लिएको थिएँ भिरघरे टुप्लुक्कै आई पुग्यो । लु मुढा तानेर यता वस हौ भतिज !
केको लागि मेरो नाम लियौ हौ काका ! त्यो झापा विर्तामोड नगरपालिकाको प्रशासकिय अधिकृत सरुवाको रोगी पाटो भन्दै थिइस् । त्यो के भाको अरे भन भन् ।
ए….! त्यो बडो गजबको कहानी छ । हुन त म डोल्पाको मान्छे झापाको कुरा कसरी थाहा पाउनु ! संजोकबस काठमाडौ जादा झापालीसंग एउटै कोठामा सात दिन बस्न पुगे । उनैले भनेको । विर्तामोड नगरपालिकामा पहिला झापामा एलडियो भैसकेका ब्यक्ति ल्याउन हाम्रो नेपाली काँग्रेस र तिम्रो नेकपाका जिल्ला नेताहरू उद्धव, चिन्तन लगायत सप्पै हुरुङरुङ लागेका रान ! तर, तिनार्को कर्मै खोटो । मिली सकेको कुरा कहाँबाट विग्रियो कुन्नि सरकारले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत त अर्कै गणेश भन्ने ब्यक्तिलाई पठाई दियो अरे !
ए…हे ! भिरघरे ! झापाका काँग्रेस र नेकपाका नेताहर्को दशैं विग्रिए छ । सप्पै मिलाई सकेको थियो होला । नेताहर्लाई भरङ्गै पारेर कस्ले गरे छ यो काम !
लान खोजेको अधिकृतले पहिला धुनधान राम्रो काम गरेका रान । निर्वाचन क्षेत्रको सिमाङ्कन गर्दा कसलाई जिताउने कसलाई हराउने भनेर मिलाएर उनैले छुट्याएका अरे । सिटौलालाई जिताउन विश्व प्रकाशको तिरको काँग्रेसी गाउँ दुईमा, अर्कोलाई जिताउन बुधवारेको चोइटो उतापट्टी अनि लिङ्गदेनलाई जिताउन तलको पाटो अर्को तिर सबैलाई खुशी पारेका रान ।
अहो ! सप्पैको प्यारो । ति पहिलेका एलडियो नापी विभागको खरदार रान कि कसो !
खै त्यो त थाहा भएन । तर, नेपाली काँग्रेस, नेकपा, राप्रपा लगायतका नेताहर्को पनि केही लागेन । साँच्चै भन्ने हो भने झापाली नेताहर्ले आफूले भनेको अधिकृत पनि पाएनन् ।
चिरिप्प पार्न खोजेका थिएछन् । कस्ले थाहा पायो भड्काई दियो क्यार !
के भन्छे यो झुम्री ! केको चिरिप्प पार्नु !
होइन काका ! दालमा कालो चै थियो । होइन भने अधिकृत जो आए पनि के फरक पथ्र्योर ! तर, काका ! झापा पनि सजिलो ठाउँ चै रैनछ । सुरुङ्गामा झापा रोडको रडाको अर्कै छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् सडक विस्तार गर्न दिदैनन् भनेर सुनाउदै थिए । एउटाको कारणले सप्पै काम रोकिएको कहानी कहन्थे ।
आ……छोड भिरघरे यस्ता कुरा । बरु काठमाडौंको राजनीति के हुदैछ ? त्यो चै विस्तारमा भन्त !
राजनीति बुझी नसक्नु छ काका ! कुच्चिएको डेक्ची जस्तो । चुहेको पनि छैन, हेर्न लायकको पनि छैन । वाख्राको टाट्नोमा छ खसीले पनि खुल्चिन्छ, बोका र वाख्राले पनि कुल्चिन्छ र पाठापाठी पनि त्यही माथि उफ्रिन्छ । कति थामोस् सिलभरको कोप्चे डेेेेेक्ची ! राजनीति त्यही डेक्ची जस्तै छ । विग्रेको भनौँ विग्रेको छैन, भत्केको भनौ भत्केको छैन, राम्रो छ भनौँ राम्रो छैन । हेर्न लायकको छ भनौँ त्यो पनि छैन ।
लु यो चैं कुरा खाट्टी गरिस् हौ भिरघरे । सप्पै पार्टीको अवस्था त्यस्तै छ । गाउँको वडादेखि केन्द्रसम्म । होइन मरुभूमि नै बनाउँछन् कि क्या हो ?
बन्दैन, चलिरहन्छ । अलि वर्ष यिनै नेता हल्लनताम भर झुलिरहन्छन् । होइन हौ ज्यामिरबोटे कान्छा हिँड घरतिर जाने हैन ! लु काका काकी अर्को आइतवार विहानै आम्लानी अहिलेलाई
घरमा आमा बिरामी हुनुहुन्छ